Mpanamboatra hazomainty jiro - Mpamatsy Jiro Fanjonoana China
Mini Night Fishing Float Stick
1.Fomba fanjonoana: Fanjonoana trondro sy sambo Fanjonoana trondro ankapobeny Fanjonoana rano mangatsiaka manjono manjono an-dranomasina
Sokajy: Hazo jiro hazandrano, Fitaovana fanjonoana, Fitaovana fanjonoana
Fomba fanjonoana: jono trolling & sambo, Jono ankapobeny, Fanjonoana trondro, Fanjonoana rano velona, Bait Casting, Fanjonoana an-dranomasina
Endri-javatra: Mora ampiasaina
Lanjan'ny harato (g): 20
Kitapo foil Fishing Glow Stick Litter Girl Glow Sticks
Ny jiro mivantana amin'ny jiro dia manamboatra hazokely jono
Sokajy: Fitaovana jiro hazavao, Fitaovana jono, kojakoja fanjonoana
Fomba fanjonoana: jono trondro sy sambo, jono ankapobeny, jono trondro, jono anaty rano, fanjonoana, fanjonoana.
100Bags / boaty samihafa habe amin'ny clip manjono mitsivalana tsorakazo hazofisaka hazo Mamirapiratra
6.0 * 50mm 7.5x75mm haben'ny hazandrano manjelanjelatra
Ny hazavan'ny jiro dia mamirapiratra amin'ny hazavan'ny alina
Factory Direct Japoney Diamond Lightstick
3. Izahay no orinasa voalohany namolavola ny raikilan'ny vokatra, amin'ny toerana voalohany eo amin'ny sehatry ny indostria, azo antoka tanteraka ny kalitao.
5 pcs / kitapo isan-karazany famaritana mamirapiratra 10 ora tsorakazo mipetaka manjono mitsingevana hazavana tsorakazo
Factory Direct 50bag / boaty Fanjonoana Fanjonoana Fitaovana Fanjonoana Fitaovana
Factory Direct 50bag / boaty glow stick fanjonoana jiro mitsingevana Fototra hazavana maivana famirapiratan-jiro ho an'ny jono
Zava-nisongadina manokana: ny fonosin-tsika: 2 pcs / kitapo, 50bag / boaty anatiny, orinasa 100pcs hafa eo amin'ny fonosana eo amin'ny lampihazo: 5pcs / kitapo, 10bag / boaty anatiny, 50 pcs totaliny Ny vidin'ny orinasa misy anay no ambany indrindra. Tsy orinasa mpivarotra izahay fa manome ny tombotsoan'ny olona afovoany mivantana amin'ny mpanjifanay. Any Chine, izahay no mpanamboatra voalohany indrindra manamboatra zana-kazo manjono. Amin'ny alàlan'ny haino aman-jery mitarika fiantohana teknolojia famolavolana antoka, ny vokatra dia afaka miaina amin'ny ...
Factory Direct 3.0x25mm. 4.5x37mm Kitapom-pahazavana manjelanjelatra 12 ora
Manodidina ny dimy ny mpanamboatra mahazatra amin'ny ankapobeny. Izahay no mpanamboatra voalohany indrindra miavaka amin'ny hazokely hazandrano. Ankoatr'izay, ny roa amin'izy ireo, miaraka amin'ny anjarany kely amin'ny tsena, dia nataon'ireo mpiasa mahay avy aminay ihany. Izy rehetra dia raikipohy amin'ny taranaka voalohany. Ny faharetan'ny fahazavana dia latsaky ny ampahadimin'ny vokatra efa misy.
Izahay no orinasa voalohany namolavola andiam-pamokarana. Efa 20 taona mahery izao no niasa tamin'ity indostria ity, noho izany dia matoky tanteraka ny vokatray izahay, ary manantena koa ny hanangana fiaraha-miasa maharitra miaraka aminareo. Manome toky ny kalitaon'ny vokatra rehetra izahay
Fotoana manjelanjelatra Mini Night Float Clip Fanjonoana jiro hazofisaka Glow Stick